Raw Flibanserin powder (167933-07-5) Vaiti - Phcoker
SKU: 167933-07-5 Category: Sex Hormone
Raw Flibanserin powder (167933-07-5) video
Raw Flibanserin powder, inotengeswa pasi pezita rekutengeserana Addyi, inoshandiswa pakutsvaga serotonin agonist uye kupikisa iyo inoshandiswa pakurapa vakadzi vepamberi-menopausal vane chishuvo chepabonde chishuvo chepabonde (HSDD). Mishonga inowedzera huwandu hunogutsa zviitiko zvepabonde pamwedzi inenge hafu yepa placebo kubva pakutanga kwemaviri kusvika matatu. Panguva imwecheteyo, Iine basa se serotonergic agonist, serotonergic antiagonist uye anodzvinyirira ..
Raw Flibanserin powder (167933-07-5) Specifications
Product Name Raw Flibanserin powder
Kemikari Name 1,3-Dihydro-1-[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2H-benzimidazol-2-one
muchiso Name Addyi
Kirasi yeMishonga Multifunctional serotonin agonist uye mushori
Molecular Wsere 390.41 g / mol
Kunyorera Point 225 ° C
Biological Half-Life ~ 11 maawa
ruvara Muchena kumira
Skukodzera DMSO: soluble10mg / mL, zvakajeka
Raw Flibanserin powder APane Yakagadzirirwa kurapwa kwekunetseka kwepabonde chirwere chechida pakati pevakadzi
Raw Flibanserin powder (167933-07-5) Tsanangudzo
Flibanserin powder ndiyo inotanga kushandisa mishonga yekugadziriswa nokuda kwehupombwe hwehupombwe hwehupombwe (HSDD) muvakadzi vanotungamirirwa neDFA muna August 2015. Yakatanga kusimbiswa semishonga inopesana nemishonga naBoehringer Ingelheim, asi yakaratidza kusakwanisa kwekuita mumiedzo uye yakawedzerwa mberi seye hypoactive kugadzirisa chirwere chepabonde neSprout Pharmaceuticals. Flibanserin's mechanism of action inonzi inofanirwa nehukama hwakasimba hwe 5-HTA1 uye 5-HTA2 receptors, kuratidza basa regonist pa 5-HTA1 uye mutsigiri pa 5-HTA2, zvichiita kuti kuderedza serotonin muuropi uyewo kuwedzera pakuwedzera norepinephrine uye dopamine neurotransmitters.
Flibanserin powder (167933-07-5) Mechanism of Action
Flibanserin's mechanism of action inonzi inofanirwa nehukama hwakasimba hwe 5-HTA1 uye 5-HTA2 receptors, kuratidza mabasa agonist pa 5-HTA1 uye mupikisi pa 5-HTA2, zvichiita kuti kuderedzwa kwe serotonin muuropi pamwe nemigumisiro pakuwedzera norepinephrine uye dopamine neurotransmitters. Flibansetrin ine hukama hwepamusoro kune serotonin receptors muuropi: inoshanda sean agonist pa 5-HT1A uye anorwisana ne5-HT2A. Mu vivo, flibanserin inosunga zvakafanana kune 5-HT1A uye 5-HT2A receptors. Zvisinei, pasi pezvikamu zvakakwirira zveuropi 5-HT (kureva, pasi pekunetseka), flibanserin inogona kutora 5-HT2A receptors yakakwirira kupfuura 5-HT (1A) receptors. Iyo inogonawo kuenzanisa nharo D4 (dopamine) receptors uye 5-HT2B uye 5-HTB2C. Chiito chayo pane zvinonzi neurotransmitter receptors zvinogona kuita kuti kuderedzwa kwemazinga e serotonin uye kuwedzere mu dopamine uye norepinephrine mazinga, ose ayo anogona kutamba chikamu muhomwe yekugadzirisa. Flibanserin inotengeswa pasi pezita rekutengeserana Addyi uye rinoratidzirwa kurapwa kwevakadzi vepremenopausal vakawana, generalized hypoactive chishuvo chishuvo chepabonde (HSDD) inoratidzirwa nechishuvo chepabonde chepabonde chinokonzera kutambudzika kwakaoma kana kusangana nevamwe.
Kushandiswa kweFlibanserin powder (167933-07-5)
Flibanserin powder ndeye 5-HT1A agonist uye 5-HT2A anopikisa yakagadzirirwa kurapwa kwechishuwo chepabonde chishuvo chepabonde kune vakadzi (1,2).
Yakakurudzirwa Flibanserin powder (167933-07-5) Dosage
100 mg muromo kamwechete pazuva pazuva
Nguva yekurapa: Uyu mushonga unofanirwa kubviswa mushure memasvondo e8 kana murwere asingatauri kuvandudzwa kwezviratidzo.
Mhinduro: Uyu mishonga hauratidzirwe kuti uwedzere kuita zvepabonde, uye hauratidzirwe mukurapwa mumadzimai ekuma postmenopausal kana mumarume.
Zvibereko zveFlibanserin powder (167933-07-5)
Zviitiko zvakaipa zvinowanzoonekwa pakati pevakadzi vachitora flibanserin powder. Zvizhinji zvezviitiko zvinotambudza zvaive zvinyoro kuenzanisa. Zviitiko zvinowanzoshushwa zvinosanganisa zvinosanganisira kuve nechezzinesi, kusuruvara, kunzwa kuneta, kurara, uye kunetseka kurara.
Kunwa doro panguva yeflibanserin pfupa kunogona kukonzera kusuruvara kwepamusoro kweropa (kuderera kwemuviri kweropa kwakabudisa zviratidzo mushure memairasi e2 ewaini yakaitika mu17%).
Avanafil poda inoshandiswa kubata varume vane dysfunction (inonzi zvakare kusimba pabonde). Avanafil ndeye weboka re …… ..